Jan 16, 2018 | English, NEWS |0|
International Development Committee condemns ministers’ decision to send just two UK experts to help prevent sexual violence against refugees An influential committee of MPs has criticised the Government for an “unacceptable” failure to respond to the plight of the Rohingya people in Myanmar. The House of Commons International Development Committee said ministers had not acted quickly enough in sending experts to help prevent sexual violence against the Muslim minority group in Myanmar’s Rakhine province. Despite “substantial evidence” of rape, sexual violence, torture and mutilations being carried out against the Rohingya, the committee said, barely any UK experts have been dispatched to the area. The...
Jan 7, 2018 | Myanmar, NEWS |0|
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသ ဖြစ်စဉ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အီးယူနိုင်ငံများအကြား နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် အီးယူဘက်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ အနောက်နိုင်ငံများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်ရောက်လာရန် မျှော်မှန်း၍မရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးက ဇန်န၀ါရီ ၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ကျင်းပသည့် Myanmar Investment Outlook Seminar -2018 အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည်။ “၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ကောင်းတာတွေရှိနေသလို ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းသလို မဖြစ်တာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ မောင်တောဒေသမှာဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အီးယူနဲ့ နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေး စာချုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညှိနေတာက ပြီးသလောက်ရှိနေပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒါကို ရပ်လိုက်တယ်။ ရပ်လိုက်တဲ့အတွက် မူလကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းခဲ့တာက ၂၀၁၇ မှာ ဒီစာချုပ်က ပြီးအောင်ညှိမယ်၊ လက်မှတ်ထိုးမယ်၊ ၂၀၁၈၊၂၀၁၉ မှာ တိုင်းပြည်ထဲမှာ အီးယူရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အများကြီးဝင်လာအောင် Promote လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှ အားကြိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သုံးနှစ်လောက်အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အနောက်နိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာ ၀င်ရောက်လာရန် မျှော်မှန်း၍မရနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ “အဲဒီတော့ ခြုံပြောရရင် ၂၀၁၈ သည် တိုင်းပြည်အတွက် Legal Infrastructure ပိုင်းကပြောရင်...
ရခိုင်ပြည်ကို သတင်းမီဒီယာနဲ့ အကူအညီပေးသူတွေ ၀င်ခွင့်ပြုဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီရဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ထိုင်း ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာ Surakiart Sathirathai က ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဖမ်းခံထားရတဲ့ ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကိစ္စ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့ တွေ့ဆုံချိန် သူပြောဆိုခဲ့ တယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြံပေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ကတည်းကဆိုရင် ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်း မီဒီယာတခုနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ဒေါက်တာ Surakiat က အဲဒီလိုပြောထားတာပါ။ ရိုက်တာသတင်းဌာနက တွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်အတွင်း ဒေါက်တာ Surakiat ပြောထားတာတွေကို စုစည်းပြီး မအင်ကြင်းနိုင်က ပြောပြပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူသားစာနာမှု အကူအညီပေးသူတွေ၊ သတင်းသမားတွေကို အကန့်အသတ်မရှိ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပေးသင့် တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Surakiart Sathirathai ကပြောပါတယ်။ Reuters သတင်းဌာနက မြန်မာသတင်းထောက် နှစ်ဦး ကိုလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အခြေအနေကို သူ့အနေနဲ့ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ် ကြီးမားတဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေကို ရှေ့ရှုနေတဲ့ အလားအလာမဟုတ်ဖို့ သူ့အနေနဲ့ မျှော်လင့်မိကြောင်း Mr. Sathirathai ကဆိုပါတယ်။ Reuters သတင်းဌာနနဲ့ ဘန်ကောက်မှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ပြောတာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့် နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရောက်ရှိဖို့အရေးပါသလို...
KLUANG: Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) have agreed to cooperate with Malaysia to help the Rohingya refugees in Bangladesh. Defence Minister Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (pix) said this was stated by Saudi Crown Prince Mohammed Salman and UAE Crown Prince Sheikh Mohammed Zayed Al-Nahyan recently. “During my visit to Morocco, I had contacted the two crown princes and they agreed to join us (Malaysia) to help the Rohingya refugees in Bangladesh. “The UAE and Saudi Arabia have agreed to channel donations and medicines to Hospital Medan Malaysia at Cox’s Bazar, Bangladesh and God-willing, in the near future...
The visit is undertaken, in coordination with the government of Bangladesh, to ascertain the human rights and humanitarian situation of the Rohingyas in Myanmar A delegation of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) will visit the Rohingya camps in Cox’s Bazar. The delegation will visit the camps for four days from Wednesday to acquire first-hand information on the state of human rights violations faced by the Rohingyas in Myanmar. During the visit to Cox’s Bazar, the officials from the OIC General Secretariat will discuss humanitarian needs and other issues of concern with the relevant authorities in Bangladesh and present...